အားလုံး တိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာ နောက်ကျမကျန်ခဲ့စေဖို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » အားလုံး တိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာ နောက်ကျမကျန်ခဲ့စေဖို့
Posted by Myanmar Web Designer on Apr 18, 2013 in Computers & Technology, How To.., Know-How, DIY | 8 comments
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက၊ မီတဲ့အတွဲကို အရင်ခိုတက်ရပါမယ်။ အဲဒီလို တက်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရောက်ချင်တဲ့ အတွဲ (၂) ကို ရထားတွဲတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပုံမှန်အတိုင်း လမ်းလျှောက်ပြီး သွားရင်တောင် ခဏနေရင် ရောက်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ အိုင်တီ နည်းပညာဟာလည်း အခုအချိန်မှာ တော်တော်ကြီး တိုးတက်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းသာ ပြေးလိုက်ရင်တော့ လိုက်လေ ဝေးလေဖြစ်ပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ အိုင်တီပညာကို လုံးဝစိတ်ကုန်သွားမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဘယ်လောက် တိုးတက် တိုးတက်၊ မိမိနားမှာ ရှိတဲ့၊ မိမိနဲ့ နီးစပ်တဲ့ နည်းပညာမှန်သမျှကို လေ့လာပါ။ တစ်ချို့လူတွေရှိတယ် ဘာပဲ လုပ်လုပ် အခြေခံ ကျကျလုပ်လေ့ရှိတယ်။ အဲလိုလုပ်တာ နေရာတိုင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့။ ဟာသအနေနဲ့ ပြောရရင် ရေတွင်းတူးရင် အခြေခံကျကျဆိုပြီး အောက်ဆုံးကနေ တူးလို့မှ မဖြစ်တာ။ အဲဒီလိုလူတွေက သင်တန်းကို အရမ်းအားကိုးတယ်၊ သင်တန်းတက်မှ အခြေခံကျကျတတ်မယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ အဲဒီ ခံယူချက်ကြောင့်ပဲ ကိုယ်တိုင် အားစိုက်ဖို့ မေ့နေတတ်ကြတယ်။ သင်တန်းမတက်ဖို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကယ့်လက်တွေ့မှာ ဘယ်သင်တန်း ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကိုယ်တိုင် အားမစိုက်ရင် မတတ်ပါဘူး။ အိုင်တီနည်းပညာမှာ အဲလိုခံယူချက်တွေရှိနေရင် ဘယ်တော့မှ မတိုးတက်ပါဘူး။ အိုင်တီနည်းပညာတွေအားလုံးက ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးတွေနဲ့ ဖန်တီးရတဲ့ နည်းပညာတွေပါပဲ။
တစ်ချို့တွေရှိတယ် design ဆွဲတဲ့ သင်တန်း တစ်ခုခု သွားတက်လိုက်တယ်။ သင်တန်းပြီးလို့ certificate ရပြီဆို သူတို့ကိုယ်သူတို့ designer တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ Programming language တစ်ခုခုကို သင်တန်းမှာ သွားတက်လိုက်တယ်။ သင်တန်းဆင်းလို့ လက်မှတ်ရပြီဆို သူတို့ကိုယ်သူတို့ programmer လို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီလိုလူတွေကို အသိဝင်အောင် ကျွန်တော်က စကားလက်ဆောင် တစ်ခုပေးလိုပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးမကောင်းသရွေ့ ဘယ်တော့မှ designer, programmer လို့ မခေါ်ထိုက်ပါဘူး။ အိုင်တီသမားလို့လည်း မခေါ်ထိုက်ပါဘူး။
အခုခေတ်မှာ လူငယ်တွေသိတဲ့ အိုင်တီသမားဆိုတာ software တွေတင်၊ crack တွေရှာတင်ပေး။ ဒီလောက်ဆိုရင် လူတော်တော်များများက IT သမားလို့ ထင်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ software တွေကို သုံးပြီးတော့ တစ်ချို့တွေကလည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဟုတ်နေကြတာတွေ အများကြီးပါ။ သူတစ်ပါးကို ပုတ်ခတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စေတနာနဲ့ သတိပေးတာပါ။ ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်နေကြမယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာ နောက်ကျကျန်ခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ software crack ရှာတတ်၊ software တွေ သုံးတတ်ရုံနဲ့ IT မဖြစ်ပါဘူး။ IT ဆိုတာ အရမ်းကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့ နည်းပညာပိုင်းမှာ နောက်ကျမကျန်ခဲ့အောင် ဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာ ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ လူတိုင်းမှားတတ်ကြတာက ကိုယ်တိုင်များများမတွေးဘဲ။ သူများဆီက ကူးချတာက များနေပါတယ်။ သူများဆီက idea ကူးချနေရုံနဲ့တော့ ဘယ်တော့မှ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်းကို ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အစပိုင်းမှာ ပိုက်ဆံများများရမယ့် လမ်းကြောင်း ရွေးထားတယ်၊ အလွယ်လိုက်ပြီး သူများ idea တွေကိုပဲ အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေက တိုးဖို့ မရှိတော့ပါဘူး၊ တိုးလည်း နည်းနည်းပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင် idea ကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက် လစာ မကောင်းတဲ့ company မှာ ဝင်လုပ်နေပါစေ။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရာတွေက ပိုက်ဆံများများပေးမယ့် company တွေကို ဖိတ်ခေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရာတွေသာ ကောင်းနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လက်ရာတွေကို တစ်ခြား company တွေကမြင်ပြီးတော့ လစာများများနဲ့ လှမ်းခေါ်နိုင်တာမို့လို့၊ တစ်ဆင့်ထက် တစ်ဆင့် မြင့်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါ်လာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် idea တစ်ခုတည်းနဲ့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ သူများ idea တွေကိုလည်း လေ့လာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် idea သုံးတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက ပိုများရပါမယ်။ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်က ၈၀%၊ တစ်ခြား အတွေးအခေါ်က ၂၀% လောက်ဖြစ်နေရပါမယ်။ အဲဒီ ၂၀% တောင် တစ်ခြား လူ ၁၀ ယောက်ဆီက ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ့် လက်ရာ (products) တွေမှာ သူများရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ လွှမ်းမိုးမနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဦးနှောက်ကို သုံးရတာ အစပိုင်းမှာ တော်တော်ခက်သလို၊ products ကောင်းကောင်းတွေလည်း ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လွယ်လွယ် အညံ့ခံပြီးတော့ ကူးချဖို့ပဲ စိတ်မစောနေပါနဲ့။ အခုအချိန်မှာ အချိန်ပေးထားလိုက်ရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ products ကောင်းကောင်းတွေ ရရှိလားမှာပါ။ စု၊ တု၊ ပြု ပဲရှိပါတယ်။ စု၊ ကူး၊ ပြု ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အားလုံးပဲ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ အမီ လိုက်နိုင်ကြပါစေ။
Myanmar Website Tutorials မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အဲဒါတော့ဟုတ်တယ်။ အိုင်တီနည်းပညာက သင်တန်းတွေမှာ အခြေခံလောက်ပဲရတာ။ ကျန်တာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ရင်းတတ်တာပဲ။ မတတ်ခင်စပ်ကြား လျောက်လုပ်လို့ ဆိုင်ပို့ရတာတော့ တပိုင်းပေါ့လေ။ အဟဲ။
ဟုတ်တယ်ဗျ … တစ်ချို့သင်တန်းတွေဆို သင်တန်း course ကို ဆွဲထားတာပဲ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာနေပြီ၊ ဒါပေမယ့် အခုထိ မပြင်သေးဘူး။ အဲဒါမျိုးသင်တန်းတွေကျတော့ တော်တော်ဆိုးတဲ့ သင်တန်းအမျိုးအစားထဲ ပါသွားပြီပေါ့။ အိုင်တီပညာတစ်ခုကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်က အဆင့်ငါးဆင့်ထဲက နံပါတ်နှစ်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ လေးချက်လုံးက မရှိမဖြစ်ပါပဲ။
“အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် product” ကို တွေ့လို့ . . မန့်ကြည့်ဦးမယ်ဗျာ . .တကယ်တော့ . .အဲ့ဒါတွေကို မေ့ထားတာ ကြာပါပြီ။ ကျုပ်တို့တွေ 2001 အလွန်လောက်မှာ Browser is Platform ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့ကြဖူးတယ်ဗျ . . . ဒါပေသိ . . Local Demand ကတော့ . . Desktop ပိုင်း မှာတင် ယနေ့ထိ ဂိတ်ဆုံး နေတုန်းဗျ . .။ ပေးရတဲ့ အချိန်နဲ့ ရတဲ့ ငွေကြေးအသပြာ မကိုက်လေတော့ . . . ကျုပ် ခု .. Taxi မောင်းနေရတယ်ဗျာ။ အချက် . . ငါးချက်လုံး ကို လက်ခံလို့ရတယ်ဗျာ . . စေတနာကို ခံစားမိတာကိုးဗျ . . ဒါပေသိ . .သင်တန်းဆိုလို့ . . . အဟီး . . ကျုပ်တုိ့ ဆွဲခဲ့တဲ့ သင်ရိုး တွေနဲ့ တိုးနေဦးမယ် . . . .။ ပြောရရင်တော့ဗျာ …….. တော်ပါပြီ . .ပြောချင်တော့ဘူး . . စိတ်နာစရာ တွေဖြစ်ကုန်မဆိုးလို့ . . . . ကိုရင် လူခါး . . . .အဲ့လို တွေ ရေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ . . . . .။
ကျွန်တော်ကလည်း အခုလို တကူးတက လာအားပေး … အဲ လာမန့်ပေးတာ အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကံခေတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်ဗျ။ ကိုလုလင်တို့ကျတော့ အခြေနေနဲ့ အချိန်အခါ မကိုက်သေးတာကို စိတ်စောပြီး လုပ်မိသလိုဖြစ်သွားတာကိုးဗျ၊ တစ်ချက်လောက် ကျွန်တော် အကြံပေးပါရစေ။ အရင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ Browser is Platform (ဘာလဲဆိုတာတော့ တိတိကျကျ မသိပါ) ဆိုတာကို ဆက် run ပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်လိုက် မင်းသမီး အဖြစ်နဲ့ပေါ့။ တစ်ကယ့် ခေါင်းဆောင် မင်းသမီးကိုတော့ ခုခေတ် demand နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အလုပ်မျိုးကို run သင့်ပါတယ်။ လက်ရှိ နောက်လိုက်မင်းသမီးက နောင်တစ်ချိန် demand အရ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါ ပွဲထုတ်လိုက်ရုံပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း အဲလို စိတ်နာစရာတွေကိုမှ စိတ်ဝင်တစား သိချင်နေတာဗျ၊ အဆင်ပြေမယ်ဆို ဖောက်သည်ချပါဦး။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က အိုင်တီနဲ့ ဝေးသော်လည်း……
နောက်ကျမကျန်အောင် ဘယ်လို လေ့လာသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေက …
တခြား သင်ယူလေ့လာမှုအတွက်လည်း အသုံးချလို့ရတာမို့ ကျေးဇူးပါ။
အင်း … ဟုတ်သား၊ ကို KZ ပြောမှ ကျွန်တော်လည်း သတိထားမိတော့တယ် …
ကျုပ်လည်း ကိုလူခါးပြောမှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်မိတယ်ဗျ…..
ကျုပ်ကတော့ဗျာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကွန်ပျူတာ အဖွင့်အပိတ်လောက်နဲ့
စာလေးဘာလေး ရိုက်တက်တာ ဒါကို အိုင်တီဆရာသမားလိုလို ထင်နေတယ်ဗျ…..
နောက်မကျသေးပါဘူး … ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ :hee: